Hey´adda wadomarista oo baajisay dhamaan imtixaanadii leysinka baabuurta. - NorSom News
Hey´adda wadomarista oo baajisay dhamaan imtixaanadii leysinka baabuurta.
Hey´adda gaadiidka iyo wadomarista ayaa qoraal ay maanta bogeeda internetka kusoo qortay ku sheegtay in la baajiyay dhamaan imtixaanadii baabuurta(Oppkjøring) ee qorsheysnaa in hey´addu ay ka qaado dadka imtixaanka balansaday bilaha April iyp May.
Sababta baajinta imtixaanada ayay hey´addu ku sheegtay in dad badan aysan wali helin waxbarashada laga maarmaanka ee wadista baabuurta, si ay u balansadaan imtixaanka leysinka wadista baabuurta. Sidaas darteed ay go´aansadeen inay baajiyaan qaadista imtixaanada ilaa amar danbe.
Hey´adda ayaa sheegtay inay mar kale dib usoo sheegi doono xiliga laga geli karo imtixaanadaas, kadib marka ay la ogaado qorshayaasha ka hortaga iyo xakameynta xanuunka covid-19. Ayna wixii macluumaad ah soo galin doonaan bartooda internetka.
Previous articleSweden: 130 qof oo hal-maalin Covid-19 u dhimatay.
Next articleHey´adda caafimaadka oo soo saartay App lagula socdo dhaq-dhaqaaqa dadka qaba Corona-virus.